श्रीमान्लाई निकै आनन्द हुन्छ - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
म २२ वर्षीया विवाहित युवती हुँ । मेरो विवाह भएको १ महिना भयो । यौनसम्पर्क गर्न त मन लाग्छ तर आनन्द आउँदैन । मेरो श्रीमान्लाई चाहिँ निकै आनन्द महसुस हुन्छ । विवाहपूर्व म हस्तमैथुन गर्थें जसबाट मलाई केही सेकेन्ड आनन्द अनुभव हुन्थ्यो तर मलाई यौनसम्पर्क गर्दा आनन्द महसुस हुँदैन । यौनसम्पर्क गरेपछि भोलिपल्ट योनि पोल्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ?
यौन आनन्द वा चरमसुख कसरी प्राप्त हुन्छ ?
प्रश्नको जवाफ दिइ हाल्नुभन्दा पहिले मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रका बारेमा चर्चा गरौं । मास्टर्स तथा जोनसनले मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रलाई चारवटा चरणमा विभाजित गरेका छन् । पहिलो चरणलाई उत्तेजनाको चरण एक्साइटमेन्ट फेज भनिन्छ भने त्यसपछिको चरणलाई प्लाटो फेज भनिन्छ । तेस्रो चरण चरमसुख अर्गाज्म फेज हो भने अन्तिम चरण रिजोलुसन फेज हो । प्लाटो फेजमा भएको यौन Stimulation लाई निरन्तर रूपमा बढाउँदै लान सकिए एउटा यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ जहाँ पुगेपछि व्यक्ति यौन तनावबाट मुक्त हुन्छ । यसको अवधि निकै छोटो हुने भए पनि मानव यौन जीवनमा यो चरणको विशेष महत्व छ, किनभने यतिबेला नै मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने सुख वा आनन्दहरूमध्ये सम्भवत: सर्वोत्कृष्ट सुखको अनुभव गर्छ । यसैलाई यौन चरमसुख भनिन्छ । स्वर्गीय आनन्द, चरम आनन्द जस्ता कयौं शब्द यसका लागि प्रयोग हुन्छन् ।
महिलाले कसरी यौन सुख कसरी प्राप्त गर्छन् ?
हस्तमैथुन गर्ने कुरा गर्नुभएको हुनाले तपाईंलाई आफ्ना यौन संवेदनशील अङ्गका बारेमा पक्कै पनि जानकारी होला । महिलाको सबैभन्दा यौन सम्वेदनशील अङ्ग ‘भगाङ्कुर’ बाहिरतिर नै हुन्छ । यसलाई हात वा औंलाले नै चलाएर यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सकिन्छ । योनि अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यसको बाहिर तिरको भाग यौन संवेदनशील हुन्छ । योनिमा केही पसाई त्यसबाट घर्षण गराएर आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्तन तथा अन्य यौन संवेदनशील अङ्गको मर्दन, घर्षण अनि चलाउने जस्ता अनेक क्रियालापमा संलग्न हुन सकिन्छ । त्यसबाहेक अन्य अनेक नयाँ प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ । पुरुषहरू जस्तै महिलाहरू पनि यौन उत्तेजक दृश्य, स्पर्श अनि यहाँसम्म कि परिकल्पनाले उजेजित हुन्छन् ।
यौन सम्पर्क गर्दा किन आनन्द नआएको ?
योनि पोल्ने सन्दर्भमा योनिको संक्रमण, सुख्खापन वा अत्यधिक घर्षण वा यहाँसम्म कि वीर्यको एलर्जीसम्म कारण हुन सक्छ । अहिले तपार्इंले दिएको सीमित जानकारीका आधारमा यसै भन्न सकिएन । थप जानकारीका साथ पत्र लेख्नु भए केही भन्न सकिन्थ्यो । यद्यपि यसका लागि स्त्री रोग वा यौन रोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क राख्न सल्लाह दिन्छु ।
विवाह कोसँग हुन्छ भन्ने कुरा भाग्यले बताउँछ